musha UNITED STATES BioGRAPHY STORies US Hollywood Nyeredzi Brad Pitt Nyaya Yevamwe Vana Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeGlobal Mtukudzi uyo anozivikanwa zvikuru nezita reNickname 'Pitt-Bull'. Nhoroondo yedu yeB Brad Pitt Nhoroondo pamwe ne Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Screen zvishoma-kuzivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvemafirimu ake makuru uye mamiriro ekuderera asi vashomanana vanofunga nezveBood Pitt's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino tisingafambi mberi, ngatitangei.
Brad Pitt Nyaya Yechiduku Plus Untold Biography Chokwadi: Upenyu Hwekutanga
William Bradley Pitt akaberekwa musi we 18th waDecember 1963 muShawnee, Oklahoma, United States. Akaberekwa kuna amai vake, Jane Etta Pitt (gurukota rekudzidzira chikoro) uye baba, William Alvin Pitt (mutyairi wepambaira uyo akambomhanyira kambani yemotokari). Bhati Brad akafananidzirwa pasi apa akaberekerwa mumusha unochengetedza uye akarere seSouth Baptist.
Kukura, Brad akaenda kuKickapoo High School kwaaiita mune zvemitambo (basketball), kukakavadzana, hurumende yevadzidzi uye mimhanzi yechikoro. Zvinosuruvarisa, haana kuzviita muchikwata chechikoro chebhasiki. Izvi zvakamuita kuti ashandise imwe sarudzo uye saka ive yekugadzira. Dennis akaunganidza yose basketball yakarambwa uye akaisa pamwe chete gamba rake risingazivikanwi raaidana nezita racho the Cherokee Rejects. Akatotora baba vake, Bill Pitt, semudzidzisi.
Pitt akaenderera mberi kuenda kuKickapoo High School uko kwaive nhengo yegorofu, kushambira uye tennis. Akatora chikamu mumakwikwi eChikoro neAnscensics pachikoro, mumakakatano echikoro, uye mumimhanzi. Mushure mokunge apedza chikoro kubva kuchikoro chesekondari, Pitt akanyoresa kuYunivhesiti yeMissin ku1982, kunyanya mukunyora kwemashoko nekutarisa pamushambadziro wakagamuchirwa nekuda kwemaonero ake akanaka. Peji yake yekutanga inoratidzwa pasi apa. Haisi imwe kunze kwePringles Commercial yake.
[arve url = "https://web.facebook.com/1609504825772409/videos/1810675132322043/" /]
Apo kupedza kudzidza kwaiswedera, Pitt haana kunzwa akagadzirira kugara. Chiroto chake chaiva kutanga kutora uye akaona mafirimu se ..."Inzvimbo inotungamirira kunyika dzakasiyana". Sezvo mafirimu asina kuitwa muMissouri, Pitt akasarudza kuenda kuguta mafirimu akaitwa.
Vhiki mbiri asati atora chikoro chake, Pitt akabva ku yunivhesiti ndokuenda kuLos Angeles, mu1986. Kuva ne $ 325 chete muhomwe yake kwaireva kuti aifanira kurara pamubhedha. Pitt akaita zvakawanda zviduku, zvakaderera kubhadhara mabasa asati aita basa rake akabviswa. Zvimwe zvinonyanya kuzivikanwa zvinosanganisira kuve mascot yekutamba kune imwe resitorendi, kuva mukomana wemvura, kushanda semotyairi uyo aizotyaira vafambisi mumakosti, achifambisa firiji uye pakupedzisira, achipfeka sechi giant chicken achishanda "El Pollo Loco".
Brad Pitt Nyaya Yechiduku Plus Untold Biography Chokwadi: Simuka Mukurumbira
Brad Pitt akapfuura munguva dzakasviba muZ1990 sezvaairwisana kuburikidza nekutsvaira kusvuta uye kuomeswa kwekupfuma.
Mumashoko ake ..."Ndakanga ndava kurwara chaizvo pamagumo eZ90s: Ndaive ndichivanza kubva kune chinhu chinoshamisa; Ndaive ndichisvuta nenzira yakawanda kwazvo; Ndakanga ndakagara pamubhedha uye ndangoshanduka kuva mupiro, uye ndakatsamwiswa chaizvo neni.
Akazoshandura hupenyu hwake uye akawana mukana wekuita chivimbo kumushandi uyo aizomutungamirira. Yaiva Pitt kuratidzwa kweAaclles muhurukuro huru yebhadhiro Troy (2004) iyo yakabatsira kusimbisa chikumbiro chake sechinhu chokutanga. Izvi zvakanyatsotevedzwa nekubatana kwebasa iri mumutambo wemapikisa-spy-versus-spy flick Muma & Mrs Smith (2005). Kubvira panguva iyo, akazova zita remhuri. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Brad Pitt Nyaya Yechiduku Plus Untold Biography Chokwadi: Kubatana Kwokutanga Upenyu
Pakupedzisira 1980s uye kutanga kwe1990s, Pitt aibatanidzwa muhukama hwakapfurikidza nehuwandu hwevadzidzi vake, kusanganisira Robin Givens (Musoro weChikoro), Jill Schoelen (Chikoro Chekucheka), uye Juliette Lewis (Vaduku Kufa? uye Kalifornia).
Uyezve, pakuwedzera, Pitt aiva nerudo rwakaziviswa uye hukama naye Nomwe co-stars, Gwyneth Paltrow, waaiti kubva ku1994 kusvika ku1997. Zvisinei, kuroorana kwakasvika pakupedzisira.
Pitt akasangana Friends mutambikadzi Jennifer Aniston mu1998 ndokumuroora mumutambo wechato muMalibu munaJuly 29, 2000.
MunaJanuary 2005, Pitt naAniston vakataura kuti vakanga vasarudza kuparadzana. Mwedzi miviri gare gare, Aniston akatumira kurambana, achitsanangura kusawirirana kwekusiyana. Kurambana kwakagadziridzwa naOctober 2, 2005. Pasinei nemashumo ehurumende kuti Pitt naAniston vaiva neukama hwekunyadzisa, Pitt vakati muhurukuro yaFebruary 2009 kuti iye naAniston "Chengetana", achiwedzera kuti ivo vose vaiva zvikamu zvikuru zvehupenyu hweumwe neumwe.
Brad Pitt Nyaya Yechiduku Plus Untold Biography Chokwadi: Ukama neAngelina Jolie
Panguva yePitt yenyaya yekurambana, kusabatanidzwa kwake naye Mr. & Mrs Smith nyanzvi Angelina Jolie akakurudzira mharidzo. Kuonga kwepenzi kwePitt kwakanyura zvikuru apo yaibatana naAngelina Jolie. Mafudzi mazhinji aJennifer Aniston anonzi Jolie a "Homewrecker,". Zvisinei, Haina kutora nguva Pitt naJolie vasati vaudza kunyika kuti ivo "wira murudo" pamusoro paMnu naVaSmith vakagara.
MunaEpril 2005, mwedzi mumwe mushure mokunge Aniston atumira kurambana, mifananidzo yemaparazzi yakabuda ichiratidza Pitt, Jolie nemwanakomana wake Maddox pamhenderekedzo yeKenya; iyo nyanzvi yakashandura mifananidzo iyi sehupupu hwehukama pakati pePitt naJolie.
Kutanga mu 2005, ukama hwaPitt naAlbertina Jolie hwakava mumwe wevanonyanya kuzivikanwa nenyaya dzepasi pose. Mushure mekusimbisa kuti Jolie akanga ane pamuviri mukutanga kwe2006, nhau huru yehupfumi yakakomberedza vaviri vacho yakawana chii Reuters, munyaya yakanyorwa "The Brangelina fever,".
Hazvina kutora nguva refu Jolie asati ava nepamuviri. Kuti varege kuchengetedza mhepfenyuro, vaviri vacho vakabva vatiza Namibhiya nekuda kwekuzvarwa kwemwanasikana wavo Shiro, iyo yakatsanangurwa ne blog paparazzi se "Mwana anonyanya kutarisirwa kubva kuna Jesu Kristu." Jolie akabereka mukunda Shiloh Nouvel muSwakopmund, Namibia, paMay 27, 2006.
Pitt akasimbisa kuti mwanasikana wavo achangoberekwa aizotora pasipoti yeNamibia. PaCannes Film Festival muna May 2008, Jolie akasimbisa kuti akanga achitarisira mapatya. Akaberekera mwanakomana Knox Léon nemwanasikana Vivienne Marcheline musi waJuly 12, 2008, kuNice, France. Pasi pane mufananidzo wemapatya avo.
Kodzero yemifananidzo yekutanga yaKnox naVienne yaiva hondo pakati pezvinyorwa zvemashoko pamusoro pekuti ndiani achatenga kodzero. Yakazopedzisira yatengeswa Vanhu uye Mhoro! ye $ 14 mamiriyoni. Mifananidzo yemapatya acho yakave yakanyanya kudhura mifananidzo yakambotorwa.
Dennis ndiye baba vanorova vana vavo vatanhatu - Maddox, Pax, Shilo, Knox, Pax uye Zahara. Anonzi anomuka mangwanani uye anopa kudya kwevana. Dennis, Angelina uye vana vaduku vakambogovana "Nhovo dzemhuri" iyo ine mamwe mabheti akawanda uye mapurisa maviri ekurara kuita nzvimbo yakakwana yevose. Dennis haabvumiri vana vake kuGoogle ivo kana Angelina Jolie. Dennis akati, "Pamakombiyuta ose evana tine mazita edu akavharwa. Havakwanisi Google ivo amai nababa vavo. Handidi kuzviita kuti ndizviriritire kune vamwe vanhu vanofunga. "
Mukuru, Maddox (mberi, pakati), Zahara (mberi, kuruboshwe) uye Pax (mberi, kurudyi) akagamuchirwa kubva kune nherera kuCambodia, Ethiopia neVietnam, pamwe chete. Vakasara vatatu vana vavo venyama.
Kubatana uye Kuroorana: Brad naJolie vakataura kuti vakabatana muna April 2012 mushure memakore manomwe pamwe chete. Vakaroora muna August 23, 2014, mumutambo wega woga muChâteau Miraval, France.
Imba yavo yakanonoka yakauya nokuti vakambobvumirana kuti vachazoroorana chete kana kuroorana kwechinguvana kune mutemo muUnited States.
Brad Pitt Nyaya Yechiduku Plus Untold Biography Chokwadi: The Divorce
Kurambana: Musi waSeptember 19, 2016, Jolie akatumira kurambana kubva paPitt, achitsanangura kusagadzikana kwekusiyana. The couple akaisa chikonzero chekurambana kutevera chimwe chiitiko mundiza apo Brad akazviti haana kurasikirwa naye uye akapesana nemwanakomana Maddox uyo aiva makore 16 panguva iyoyo.
Muna February 2017, Angelina akataura nezvekurambana kwekutanga, achitaura kuti: "Handidi kutaura zvakanyanya pamusoro pazvo, kunze kwekutaura kuti yakanga iri nguva yakaoma uye isu tiri mhuri, uye isu ticharamba tiri mhuri. Tichapfuura munguva ino uye tine tariro yekuva mhuri yakasimba nokuda kwayo. " MunaAugust 2017 yakaudzwa kuti kurambana kwave kuripo "Ramba uchibata" uye kuti ivo vaitove vachironga kudzoka pamwechete. Asi muna Kubvumbi 2018, The Zuva zvakasarudzika zvakaratidza kuti raramo yapedzwa uye Brad akabvumidzwa kuwana kuvana.
Brad Pitt Nyaya Yechiduku Plus Untold Biography Chokwadi: Upenyu hweMhuri
Brad Pitt ari pedyo nemhuri yake yaimbove inoshandisa nzvimbo yepamusoro yemhuri yemamiriro ezvinhu. Tinokupa tsanangudzo pfupi yemhuri yemhuri yake.
Baba: Baba vaBrad, William Alvin Pitt akafananidzirwa pasi apa aiva mutyairi wemotokari uyo akazouya akava muridzi wekambani yemotokari. Akamutsa mhuri yake muSpermill, Missouri uko mwanakomana wake wokutanga, Brad akaberekwa. William nokuda kwekushanda zvakaoma akava umwe wevatori vemakambani makuru muTorway.
Amai Vake: Jane Pitt, aiva mudzidzisi wekusekondari asati apedza basa.
Bhuku raBrad Pitt rakaparadzaniswa naAngelina Jolie rakamuswededza pedyo naamai vake, Jane Etta Pitt, uye runyerekupe rwaiva nekuti akagara nemwanakomana wake mushure mechiitiko chinosuruvarisa.
Vanun'una: Dennis ane vanin'ina vake vaduku, Douglas (akaberekerwa 1966) uye Julie Neal (akaberekerwa 1969). Douglas Pitt ndeyeMabhizimisi wemabhizimisi, mutengesi uye philanthropist. Ndiye Mutungamiri wenyanzvi weUnited Republic of Tanzania, musangano waakabata kubva muna April 2010. Dennis ane makore matatu kupfuura Douglas.
Sekomukomana, Doug aiva mwana akaoma. Akanga ari anonyanya kuzivikanwa nevana vatatu vePitt, anodaro Jane Pitt, amai vavo.
Hanzvadzi sikana- Hanzvadzi yaD Brad Pitt, Julie Neal, mutungamiri wekuvimbika weMissinia, ndinotungamira I Pour Life, iyo inobatsira kupa hutano hwebasa kuvanhu vane HIV uye maperembudzi muEthiopiya. Sekukurudzirwa nebasa rakanaka raAngelina naBrad, muduku Pitt sibling akavewo akagadzira tsika yekugamuchira muAfrica. Ane vana vaviri vokuEthiopiya vanogamuchirwa. Pasi pane mufananidzo wemumwe wevanakomana vake.
MUZUKURU: Zvinoshamisa asi chokwadi. Mutungamiri Barack Obama ndiye muzukuru wepfumbamwe waBrad Pitt. Vatsvakurudzi veNew England Historic Genealogical Society vakaita kuti kuwanikwa ku2008. Izvo zvakabatanidzwa naEdwin Hickman, uyo akafa muVirginia mugore re1769.
Brad Pitt Nyaya Yechiduku Plus Untold Biography Chokwadi: Inobata Kuteerera
Brad anotora basa rake rekutamba zvakadzama. Akagadzirira kuita chero chinhu kuti anyatsoratidza chimiro chake. Kamwe pane imwe nguva, Brad nokuzvidira akaenda kuna chiremba wemazino kuti meno ake epamberi akachekwa kuitira basa raTyler Durden mu Fight Club. Meno ake akange agadziriswa mushure mokunge apedzisa kuita bhafirimu. Uyewo, kumubatsira kuti ave muitiro wekodhidhi yake ye1995 Vane gumi nevaviri, akapedza zuva rimwe muPadladelphia wechipatara chepfungwa.
Brad Pitt Nyaya Yechiduku Plus Untold Biography Chokwadi: Movie Facts
Dennis akakuvadza tete yake Achilles achiri kutamba Achilles muTroy mu2004. Maererano nemutungamiriri Wolfgang Petersen, Brad akazvikuvadza paanenge achiita basa. Nekunaka, akafamba nenzira yakaoma kwemwedzi yakawanda nekuda kwekutambudzika kubva mukukuvara.
"Hondo Yenyika Z" iye zvino ndiyo firimu yeBlub Pitt yepamusoro-soro. Paramount Pictures inoti zombie flick, iyo yakabudiswa nekambani yeBrad Plan B, yakayambuka $ 500 mamiriyoni, Troy anopfuura kupfuura kuti ave iye firimu yepamusoro yepamusoro.
Brad Pitt Nyaya Yechiduku Plus Untold Biography Chokwadi: Media Facts
Pitt yaanoona zvepabonde chikwata chave chakatorwa nemichina yakawanda, kusanganisira muzinda, uyo mu1995 akamutumidza mumwe we25 nyeredzi nyeredzi mune zvakaitika mufirimu mu1995. Mugore iroro, Pitt akakunda Vanhu Vakanyanya Kupfuura Vanhu Varipo, chibvumirano chakakunda zvakare mu 2000. Mumwe musikana weC19 wemakore akambopinda kumba kwake kweLos Angeles kuburikidza newindo rakazaruka mu1999 uye akapfeka nguo dzake uye akarara mubhedha wake vasati vamurira maawa 10 maawa. Akarayirwa kuti agare neyadhi ye100 kure naye kwemakore matatu.
Pitt akaonekwa pa Forbess Annual Announcement 100 urongwa hwe100 vane simba kupfuura vamwe vose mu2006, 2007, uye 2008, paNo. 20, No. 5, uye Nha. 10 maererano. Muna 2007, akanyorwa pakati pe Time 100, kuumbwa kwe100 vanhu vakakurumbira munyika yose, sekusarudzwa gore negore NGUVA.
Brad Pitt Nyaya Yechiduku Plus Untold Biography Chokwadi: Anopa Uchenjeri
Anopa maparera euchenjeri. "Izwi iri rekugara nekusingaperi rakashata ad rakapfurikidza nokuti nguva dzemazuva iwayo dzakafukidzira iwe kwemazuva anotevera akajeka; chimwe nechimwe chinokubatsira kuti unzwisise imwe, " akati. "Isu tose tiri kutsvaga chinangwa muupenyu hwedu, rudo uye kubudirira kwatiri uye kune avo varipoteredza."
Brad Pitt Nyaya Yechiduku Plus Untold Biography Chokwadi: Dambudziko rake
Pitt anotenda kuti anotambura neprosopagnosia, kusakwanisa kuyeuka zviso. Pitt akati aireva kusaremekedza, asi kuyeuka chiso chevanhu kunenge kusingaiti kunze kwekunge achivaona nguva dzose.
Tinovonga nekuverenga nyaya yedu yeBrad Pitt Childhood pamwe ne untold biography chokwadi. At ChildhoodBiography, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!